नेपालमा घट्यो यस्तो घटनाः ‘दाजु भाउजुलाई दाम्लोले बाँधेर औँठाछाप’ « Nepal's number 1 Entertainment news portal
नेपालमा घट्यो यस्तो घटनाः ‘दाजु भाउजुलाई दाम्लोले बाँधेर औँठाछाप’
Published :2June, 2018 9:02 pm
अंशवण्डासम्बन्धी विवादमा जनकपुरमा आफ्नै दुई भाइले दाजु र भाउजुलाई दाम्लोमा बाँधेर कुटपिट गरी कागजमा औँठाछाप गराएको खुलासा भएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका २१, कुर्था बस्ने रामएकबाल मण्डल र रामकेवल मण्डलका परिवारले दाजु र भाउजुलाई दाम्लोले बाँधेर कागजमा औँठाछाप गराएको खुलासा भएको हो ।
उनिहरुले दाजु शिवजी मण्डल र भाउजू शान्तिदेवी र बुहारी अमृता देवीलाई दाम्लोले बाँधेर कुटपिट गर्दै कागजमा औँठाछाप गराएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । तीनैजनालाई जबरजस्ती घरबाट निकालेर कुटपिट गर्नुको साथै बाँधेर औंठाछाप लगाएको शिवजीका छोरा अनिल मण्डलले दुखेसो पोख्नुभयो । उनीहरुलाई नेपाली कांग्रेस र राजपाका स्थानीय नेतालगायत लेखनदासले समेत सहयोग गरेको अनिलले बताउनुभयो ।
कांग्रेसका स्थानीय नेताहरु राजाराम मण्डल, महेन्द्र महतो, उमेश यादव, राजनारायण साह र राजपाका परमेश्वर साहलगायत र लेखनदास ओपेन्द्र साह समेतको संलग्नतामा आफ्ना बुवाआमालाई निर्घात कुटपिट गरी जबरजस्ती औंठाछाप गराइएको अनिलको भनाई छ । कांग्रेस कार्यकर्ता भएकै कारण उनीहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले ढिलासुस्ती गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रहरीका अनुसार दुवै भाइका छोराहरु सन्तोष, मनिष, ओमकार, रवि र आनन्द मण्डलले निर्घात कुटपिट गरी जबरजस्ती औँठाछाप गराएका हुन् । दाजुभाइबीच पहिल्यैदेखि अंशबण्डासम्बन्धी विवाद चल्दै आएको थियो । दाजु शिवजीले मुद्दा जितेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भाइहरुले जबरजस्ती आफूहरुको नाममा गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।
शिवजीसहित घाइते तीनै जनाको उपचार जनकपुुर अञ्चल अस्पतालमा भैरहेको छ । घाइतेमध्ये शिवजी मण्डल र उनका पत्नी शान्ति देवीलाई गम्भीर चोट लागेको अस्पतालले जनाएको छ । पिडितले दोषीलाई कारबाहीका लागि पहल गरिदिन सबै पक्षसँग आग्रह पनि गर्नुभएको छ । भाइहरुको कुरा नमानेपछि आज बिहान उनीहरु पुरै परिवार शिवजीका परिवारमाथि जाइलागेका हुन् ।
पाथिभरा माताको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस् तपाइको भाग्य कस्तो ?
मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) एउटै कामबाट दोहोरो लाभ
उपमेयर कपमा भक्तपुरको शानदार विजय
उपमेयर कप’ महिला फुटबल प्रतियोगितामा आज भक्तपुर नगरपालिकाले पुतलीबजार नगरपालिकालाई ८-१ फराकिलो गोल अन्तरले जित
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ…..परिणाममुखी जिम्मेवारी वहन गर्ने समय आएको
पाँचथर बस दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो !
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ मा भएको बस दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ ।
पाँचथर बस दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो
प्रदेश नं २ विभिन्न जिल्लामा सिटी जुलुस प्रदर्शन